ကျွန်းနက် - ဝီကီပီးဒီးယား
ဖိုင်:Black Teak Testing.jpg
ဖိုင်:Black Teak Beads.jpg
Black Teak Beads From The Miracle Black Teak
၁ ကျွန်းနက်အကြောင်းနှင့် အသုံးဝင်ပုံ
၂ ကိုးနဝင်း ကျွန်းနက်
၃ ဆင်းတုတော်ထုလုပ် ကိုးကွယ်ခြင်း
၄ အဂ္ဂိရိတ်ပညာနှင့် သိဒ္ဓိဝင် ကျွန်းနက်
၅ လာ်ရွှင်ငွေဝင် သိဒ္ဓိရှိခြင်း
၆ နာနာဘာ၀ ဝိနာဘာဝတို့အန္တာရယ်မှ ကင်းဝေးစေခြင်း
၇ ကျွန်းနက်အား ဆေးအဖြစ်ဖြင့် အသုံးပြုကြခြင်း
၈ ကျွန်းနက်သား စစ်မစစ် စစ်ဆေးနည်း
၉ ကျွန်းနက်အား ကိုင်ဆောင်ရာတွင်သတိပြုရန် အချက်များမှာ
ကျွန်းနက် များကချင်ပြည်နယ်မိုးကောင်းမြို့နယ်အတွင်းကရင်ပြည်နယ် မြဝတီ နား တဝိုက်ပေါက်ရောက်ပြီး ရှမ်းပြည်နယ် မိုးမိတ်အနီးတဝိုက်နှင့်မြန်မာနိူင်ငံရှိ ရေနံမြေနှင့်ဆက်စပ်နေသော မကွေး ၊ရေနံချောင်း၊ချောက်၊ကလေးစသည့် ဒေသများတွင် ရှားပါးစွာ ပေါက်ရောက်သည်။ကျွန်းနက်သည်မူလအစက ကျွန်းဖိုပင် ဖြစ်သော်လည်း ရေနံမြေ၏ အောက်ခံမြေဆီလွာနှင့် ကျောက်အလွာကြောင့် သက်တမ်းရင့်လာသည့်အခါကျွန်းနက် အဖြစ်သို့ပြောင်းလဲသွားသည့် သယောင်ရှိသည်။ ဂမ္ဘီရအနွယ်ဝင် သစ်ပင် ဖြစ်သောကြောင့် တော်ရုံတန်ရုံ တွေ့ရှိဖို့ မလွယ်ကူပေ။ သိဒ္ဓိဝင် ဂန္ဘီရ သစ်တစ်မျိုးဖြစ်သဖြင့် မြန်မာ့ရိုးရာ အယူအရ ထိုက်တဲ့သူထံအလိုလိုရောက်လာတတ်တယ် ၊ ထိုက်သူသာ ကိုင်ဆောင် အသုံးပြုနိုင်တယ်လို့အဆိုရှိတယ်။ ဘုန်းကြီးသော ဆရာတေ်ာဘုရားကြီးများလည်း ကျွန်းနက်ဆင်းတုတော်များ မှာယူ ပူဇော်လေ့ရှိပါတယ်။
ကျွန်း တနလာၤနံ ၂ နက် စနေနံ ၇ ပေါင်း၉နဝင်းမိပါတယ် ထို့ကြောင့် ခုနှစ်ရက်သားသမီးများ အတွက် ကောင်းကျိုးချမ်းသာ အဖြာဖြာကို ဆောင်ကျဉ်းပေးမည့် သစ်မြတ်ဖြစ်ပါတယ်
ကိုးကွယ်သောအိမ်မိသားစု၏ဘေးအန္တရယ်အသွယ်သွယ်ကင်းစေချင်းရန်သူမျိုး ငါးပါး ဘေးကင်းစေချင်းများ အကျိ ုးရှိစေသည့်အပြင် ထုလုပ်ကိုးကွယ်သူကိုဘုန်းကြီခြင်း အမျိုးမျိုးသောလာဘ်ရွှင် ငွေဝင်ခြင်း၊ အန္တရယ်ကင်းခြင်း အစရှိ သောအကျိုးများပါရှိစေနိုင်ပါသည်
အဆောင်များထုလုပ်၍ မိမိစတင်ဝတ်ဆင်မည်ဆိုပါက နံနက် အာရုံတက်ချိန်တွင် ကိုယ်လက်သန့်စင် ငါးပါးသီလခံယူ၍ နတ်ဒေဝါတို့အားမေတ္တာပို့သ၍ ဂုဏ်တော်ကိုးခေါက်ရွက်ဖတ် သိဒ္ဓိတင်ကာ ညာလက်မောင်း၊ ညာလက်ကောက်ဝတ် တွင်ချည်၍ဆောင်ထားပါက လာဘ်ရွှင် ငွေဝင် စေခြင်း ၊ မသမာသူတို့ အောက်လမ်းဖြင့်အလွယ်တကူ မလုပ်ကြံနိုင်ခြင်း၊ ရန်သူများမှ မိမိအား အလွယ်တကူလုပ်ကြံရန်မပြုနိုင်ခြင်း အစရှိသဖြင့် ဂန္ဘီရအစွမ်းများ ရှိကြောင်း ယုံကြည်ကြပါသည်။
ဖိုင်:Black Teak Replica.jpg
Black Teak Buddha Replica (Photo: The Miracle-Black Teak)
အဂ္ဂိရိတ်ပညာနှင့် သိဒ္ဓိဝင် ကျွန်းနက်ပြင်ဆင်
ကျွန်းနက်ကိုမီးရှို့ပါက ရွှေရောင်ပြာငွေရောင်ပြာ သံလိုက်ပြာများ တွေ့ရှိရှိပါမည်။ အဂ္ဂိရိတ်ပညာရှင်များ ရွှေရောင်ပြာသံလိုက်ပြာများ ကိုစုပီး လက်ချားဆော်ဒါများချော်ချက်ပီး ထည့်ထည့်ထိုးပါ သံပြဒါးလုံးရပါမည် ဂေါ်လီလုံးကဲ့သို့လုံးနေသော သံပြဒါးစစ်စစ်လုံးရမည်ဖြစ်၍ ကြိ ုက်ရာသံလမ်းကိုဆက်တက်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ အဂ္ဂရိတ်ပညာဖြင့် ဓာတ်လုံး
ရအောင် ထိုးနိူင်လျှင် ပီယသီဒ္စီ၊ ကာယသိဒွီ တို့၌ အလွန်ထူးခြားသည်။ စာဆိုအရ လက်ခတ်သ ံကျွန်းဖိုသားသောင်တိုင်က ကြားသလေလေ…ဆိုသောသီချင်းမှာ ကျွန်းနက်ကိုဆိုလိုသည်ဟု ယူကြသည်။ အထက်ကောင်းကင်အထိပင် လက်ခမောင်းခတ်လောက်အောင် သိဒ္ဓိဝင်သော သံမှာ ကျွန်းနက်သံဖြစ် သည်ဟုဆိုကြခြင်းပင်ဖြစ်သည်။
ပုတီးစီရင်ပြီးထိုပုတီးဖြင့် ဂုဏ်တော်၉ပါးနေ့တိုင်းစိပ်ပါကလာဘ်ရွှင်စေပါတယ်၊ လိုအပ်သောအခါ ပုတီးစောင့်နတ်က အိပ်မက်ပေးတယ်လို့လည်း ပြောကြပါတယ် . ကျွန်းနက်ဘုရား ကိုအိမ်မှာပူဇော်ထားပါ။ လာဘ်ရွှင် ရန်ကင်း ငွေဝင်ကြမ်းလို့ စိတ်ချမ်းသာရပါလိမ့်မယ်။ ဘုရားထုမည်ဆို အိမ်စီးပွားတိုးဖို့ ဇဗ္ဗူ ပတိ မဟာမုနိ ကုမဏ္ဍီရုံးခန်း ဈေးဆိုင်များတွင်ပူဇော်ကိုးကွယ်မည်ဆိုပါက လာဘမုနိရှင်သီဝလိ ရှင်ဥပဂုတ် တို့ထုလုပ်ပူဇော်ကြပါတယ်မိတ်ဆွေတယောက် မှာယူပူဇော်ထုလုပ်တဲ့ရှင်ဥပဂုတ်ဟာဆိုရင် ဆိုင်ရှေ့အရောင်တင်နေတုန်းတွင်ပင် ဈေးဝယ်သူများတဖွဲဖွဲကျလာ ထူးထူးခြားခြားမြင်တွေ့ရပါတယ် နောက်ပြီး ဝိဇ္ဇာဓာတ်နှင့် နဂါးသိုက်တို့နဲ့ဆက်စပ်ပြီး ပဌာန်းဆက်ရှိသူများသာပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်
ဈေးရောင်းကောင်း ဝယ်သူစည်ကား လက်မလည်အောင် ရောင်းလိုပါသလား? ဈေးရောင်းဈေးဝယ်လုပ်သူများအနေဖြင့် မေတ္တာသုတ်ရွတ်ဖတ်၍ ကျွန်းနက်အား ပက်ဖြန်းခြင်းဖြင့်လဲ ဈေးဝယ်သူများစည်ကားစေပါသတဲ့ခင်ဗျာ။ အင်မတန်လွယ်ကူပြီးရိုးရှင်းလွန်းလို့ ဟုတ်မှဟုတ်ပါ့မလားထင်မိမှာပါ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်းနက်လေး လက်တစစ်လောက်ရှာပြီး လုပ်ကြည့်ပါ။ တကယ်ထူးခြားမှုရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ အိမ်၊ မြေ၊ တိုက်တာ၊ ခြံ၊ ကား ...အမြန်ရောင်းထွက်ချင်သလား ? အပြင်မီး၊ အတွင်းမီး၊ အပူသောကမီးများ ငြိမ်းအေးလိုသလား ?
မန်းလေးမှ တရားရိပ်သာဖွင့်လှစ်ထားသောဆရာတော်ဘုရား၏ ဩဝါဒအတိုင်း .. ကျွန်းနက်အသားလေးဖြင့် စီရင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ ကျွန်းနက်အတုံးလေးတတုံး (သို့) အချောင်းတချောင်းဖြင့် ရောင်းလိုသောမြေကွက်အလယ်ဗဟိုရှိ မြေကြီးပေါ်ထောက်၍ ... ရောင်းလိုသောဈေးဖြင့်အမြန်ရောင်းထွက်ဖို့ဆုတောင်းရမှာပါ။နောက်တနည်းကတော့ ရေသန့်ဗူးထဲကို ကျွန်းနက်လက်မလောက်လေးထည့်၊ ဘုရားအားကပ်လှူ၍ပရိတ်ပဋ္ဌာန်းများရွတ်ဖတ်ဆုတောင်းပြီး ...ရောင်းလိုသော ကုန်၊ ကား၊ အိမ်ခြံတို့အား ပက်ဖျန်း ပေးခြင်းဖြင့် အလျင်အမြန်ရောင်းထွက်စေပါတယ်။
နာနာဘာ၀ ဝိနာဘာဝတို့အန္တာရယ်မှ ကင်းဝေးစေခြင်းပြင်ဆင်
ကျွန်းနက်အသားကိုဆောင်ထားရုံဖြင့် ပယောဂအတိုက်ကင်းစေတယ် ၊ သရဲမခြောက်စေ မကပ်စေပါဖူး ( သရဲ တစ္ဆေ ကြောက်တတ်သူများအထူးဆောင်သင့်ပါတယ်)ညည အိမ်မက်ဆိုးတွေမက်ပီ အနှောက်အယှက်ခံနေရပီလား? ကျွန်းနက်သားကိုပဲဆောင်ထားပါ။အိမ်မက်ဆိုးတွေမမက်စေပါဖူး။
ကျွန်းနက်အား ဆေးအဖြစ်ဖြင့် အသုံးပြုကြခြင်းပြင်ဆင်
သွေးကင်ဆာ သွေးအားနည်းရောဂါ နှလုံးရောဂါဝေသနာရှင်များပျားရည်နှင့်သောက်ပါ ချမ်းသာကြပါမည် လို့ဆိုပါတယ်။ အတက်ရောဂါရှင်များ ကျွန်းနက်စအား ဆောင်ထား၍ တက်သည်နှင့်ကျွန်းနက်ကို မီးရှို့ပြီး ရူနိုင်သည်။ ကိုယ်လက်ကိုက်ခဲ ထုံကျင်သူများ ကြောင်ပန်းငယ်နှင့်ရောသွေးပြီး ကိုယ်ခန္ဓာ အားလိမ်းကျံ နှိပ်နယ်က သက်သာ ပျောက်ကင်းကြသည်။ ကျွန်းနက်သားအမှုန့်အနည်းငယ်အား ဆေးတော်တို့ပိုမိုစွမ်းစေရန် ထည့်သွင်းဖော်စပ်ကြပါသည်။
ကျွန်းနက်သား စစ်မစစ် စစ်ဆေးနည်းပြင်ဆင်
ကျွန်းနက်သားအစစ်သည် မီးပြာချလျှင် နီညိုရောင်သန်းသော ရွှေပြာကို ရရှိမည်။ ရွှေပြာကို စက္ကူပေါ်တွင် ပွတ်ကြည့်ပါ ဝင်းဝါသော ရွှေရောင်ဖြစ်ရပါမည်။ ရွှေပြာအချို့ကိုယူ၍ သံလိုက်ဖြင့် ဆွဲကြည့်ပါ၊ သံလိုက်မှသာလျှင် ကျွှန်းနက်သားအစစ် ဖြစ်သည်။
ကျွန်းနက်အား ကိုင်ဆောင်ရာတွင်သတိပြုရန် အချက်များမှာပြင်ဆင်
*လူများနင်းသော နေရာ၊ ခြေနင်းဖတ်၊ ကြမ်းပြင်၊ နံနိမ့်စေသာနေရာများတွင်မထားရပါ။ *အိမ်သာ၊ ရေချိုးခန်း၊ အမှိုက်ပုံး၊ မီးဖိုချောင် စသည့်နေရားတွင်မထားရပါ။
*ပြတင်းတံခါးအနီး၊ အိမ်အပြင်လဟာ တွင်မထားရပါ၊ ကျီးနားက ဂုဏ်သတ္တိပျယ်သည်ဟု အယူရှိပါသည်။
*အဝတ်တန်း၊ ထမိန်တန်းအောက် မထားကောင်းပါ၊
*ခြောက်သွေ့ သန့်ရှင်းသော မြင့်မြတ်သောနေရာတွင်သာ ထားရန် အကြံပြုအပ်ပါသည်။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ကျွန်းနက်&oldid=494705" မှ ရယူရန်
၂ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၉၊ ၀၅:၃၁ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၂ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၉၊ ၀၅:၃၁ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။